Yakabatanidzwa magiya maiyuniti TURBO MUCHINJEYESESA gearbox mugadziri
Yakabatanidzwa magiya maiyuniti TURBO MAMPINYI AIVA
Yakawandisa Mutsara weKumhanya Kuwedzera kweVakakwira-Performance Application
Yepamusoro-mhanya Gearbox Yekumhanyisa Yakawandisa Kubva kuSogears Kugadzira TURBO-MULTIPLICATEURS Yakabatanidza magiya maiyunivhesiti, Core yuniti inoshanda kwazvo compressor system.
Speed ​​Kuwedzeredza Gearbox Kubatsira
Yakabatanidzwa magiya magirini & Turbo Multiplicateures
Vanokurumidza Vanowedzera vanogadzirwa muhukuru hwakawanda hwezvakasiyana zvigadzirwa uye misika. Aya mabhegi akajairwa akagadzirwa uye akavakirwa kugadzirisa akakwirira RPM chaiwo zvikamu. Tsika Yekumhanyisa Yekuwedzera Solutions, kubva pakunyatso giya bhokisi revagadziri NER GROUP. Yakakwira Performance, Yakadzika Yekumhanyisa Kumhanyisa yekuwedzera gearbox, isu Dhizaini uye Kugadzira Precision Zvikamu: Precision MaGiya, Akakurumbira Ekumhanyisa Ekuwedzera ane flywheel coupling, SAE dzimba, kunyangwe inogona kushushikana-kurerutsa simbi yekugadzira, yakajairwa keyed stub kuburitsa shaft lube pombi uye kupisa exchanger yakapihwa. , kana zvichidikanwa. Chaizvoizvo zvemhando yepamusoro-mashandiro ekushandisa edu ekumhanyisa ekuwedzera ndeamapombi, majenareta, crushers edombo, compressors, masanganiswa, madhiraivha uye machipisi.
Isu tinopa yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera. Dhizaini yekukurumidza kuwedzera gear bhokisi iyo inogona kuwedzera 12 rpm kusvika 1400 rpm, Tsika Gearboxes, yakakwirira torque uye yakanyanya customizable kuti iite zvakanaka.
Isu tine timu yakasimba yekugadzira tsika yakavakirwa magiya emabhokisi anokwira akakwira RPM chaiwo zvikamu. Inorema basa Maindasitiri Mazhinji-anomhanya mabhokisi.
Yekumhanyisa magiya emabhokisi akakosha muzvikamu zvakawanda zvakakosha. Yakakwira zvekumhanya magiya mabhokisi ari kuwanikwa seanokurumidza kukwidziridzwa uye anomhanyisa zvinoderedza kuti ashandiswe mune dzakawanda zvisiri zvekushanya, maindasitiri kunyorera.
Tsvaga Iyo Catalog
Vagadziri veyakarongeka uye tsika yakakwira density mapuraneti ejuru magiya anosanganisira kukurumidza kumhanya kune maindasitiri masystem
Aya emasokisi akavakirwa magiya akagadzirwa uye akavakirwa kuti akwanise kukwiridzira RPM chaiyo yakagadzirisirwa zvimwe zvinhu.Izvi zvekuita kwepamusoro-magadzirirwo zvakaiswa mukati mekupinza uye zvigadzirwa zvigadzirwa zvakamira pa 90-degree englesHigh inobudirira kurudyi kona bevel gearbox yakagadzirirwa yakakwirira torque High mhanyisa magiya emabhokisi zvinhu zvakakosha mune zvakawanda zvikumbiro zvakakosha
Yakakwira zvekumhanya magiya emabhokisi ari kuwanikwa seanokurumidza kukwidziridzwa uye anomhanyisa kudzikisira ekushandiswa mune zvakawanda zvisiri zvekushanya, maindasitiri ekushandisa. Iyi yekupedzisira sarudzo inopa vashandisi kugona kwekuita-yakaderera-torque yakakwirira-kumhanya mabhureki kana yakakwira-torque yakaderera kumhanyisa mitutu.
Isu tine hunyanzvi mukupa vatengi vedu neinjiniya Yekuwedzera yekuwedzera gearbox mhinduro. inoenderana shaft magiya, akakosha magiya, mapuraneti magiya uye magetsi ekuparadzira magiya. Inoratidzirwa kuva yakavimbika, yakachengeteka, yakaumbika uye inoshanda, Sundyne HMP 7000 yakasangana yakatarwa pamusoro pemapampu ane anosvika kumatanho mana inopa huwandu hwakanyanya hwekumanikidza kwekuita mabhenefiti. Kana iwe uine zvaunofarira zvigadzirwa, huya utisangane nesu! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando sekubatsira kwedu uye mutengo wakaderera kutendeseka. Kana uine chero mibvunzo, unogona kutirovera runhare, isu tichafara kukubatsira!